I-Cloud Room, ye-B&B yethu, ilungele imindeni, ngamamitha-skwele ayi-17,5. Inikezwe umbhede owodwa owodwa kanye nombhede owodwa wesiFulentshi (140x190cm), amawodrobhu amabili kanye netafula lekhofi elilodwa, lokubhala noma lokufunda.
Uma ucela, singangeza omunye umbhede owodwa noma umbhede omncane wengane.
Inendlu yokugezela yangasese ene-shower-cabin kanye ne-bidet.
Igumbi line-air conditioner.
I-"House in the Wood" itholakala emagqumeni imizuzu engu-5 ukusuka e-Isola Vicentina (imizuzu engamashumi amabili ukusuka eVicenza).
Izungezwe ngokuphelele izinkuni futhi inikeza umbono omuhle wezwe. Inokuthula futhi igcwele imvelo (ungabona kalula izingwejeje, izinyamazane, onogwaja nezinyoni eziningi).
Ngaphandle kwengadi kunompheme omuhle, umthombo omncane kanye nedamu lokubhukuda lapho ungakhululeka khona futhi ushiswe nelanga.
Kusuka endlini ungathatha izinyawo eziningi ezinhle nezindlela ezinkuni ngezinyawo noma nge-MTB. Kuvalwe kakhulu kithi kukhona nezikole ezimbili zokugibela.
Uma ufuna ungazama ukwelashwa kwe-Shiatsu.
Vakashela isizindalwazi sethu: lacasanelboscovicenza
I-B&B itholakala phakathi komzila ongu-12 km wemizila yokuhamba emagqumeni azungeze i-Isola Vicentina. La magquma agcwele izinganekwane mayelana nokwakheka kodaka lwawo kanye nemigede. Kuvalwe kakhulu kithi kukhona nezikole ezimbili zokugibela.
I-Vicenza idolobha lasePalladio, ungavakashela izindlu eziningi ezinhle ezifana ne-"la Rotonda" ne-"Villa Valmarana ai Nani", i-Olimpic Theatre eyingqayizivele, i-Basilica esanda kubuyiselwa enhliziyweni yedolobha.
Uma ungathanda ukuzwa ukunambitheka kwamawayini ethu adume kakhulu: il Durello dei Lessini, il Cabernet di Breganze, il Garganega dei Colli Berici, il Torcolato di Breganze, il Vespaiolo e il Tai rosso.
Noma ezinye izitsha zethu ezidumile zeVicenza: Baccalà alla Vicentina, i Torresani di Breganza, Bigoli con l’arna, Gnocchi con la fioretta.
Ungathenga imikhiqizo ejwayelekile efana namatshe egolide, i-ceramic, izinkuni, ingilazi kanye ne-iron manufactory. Konke okuyikhwalithi ephezulu futhi kuyingqayizivele.
E-Vicenza nasezindaweni ezizungezile ungathola izindawo eziningi zokudayisa i-Armani, i-Dsquared2, i-Diesel, i-Valentino, i-Grifoni, i-Bottega Veneta, i-Deimos, i-Marzotto, njalonjalo.
I-House in the Wood iyi-Bed and Breakfast Breakfast, sihlala endlini ngaso sonke isikhathi ukuze sihlangabezane nesicelo sakho.